सबैलाई सुरक्षित रहन भन्दै कोरोनाका सयौं बि’रामी बचाएका डाक्टर विवेकले गरे आ’त्म’ह’त्या – Ramailo Sandesh
काठमाडौं– भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक जना डाक्टरले आ’त्म’ह’त्या गरेका छन्। दिल्लीको सा’केतस्थित म्याक्स अस्पतालको कोरोना वार्डमा ख’टिएका ३५ वर्षीय डाक्टर विवेक रायले आ’त्म’ह’त्या गरेका हुन्।
कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि विवेक निकै त’नावमा रहेको भा’रतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दिल्ली प्रहरीले विवेकलाई सा’डीको स’हायताले पं’खामा झु’न्डि’ए’को अवस्थामा फेला पारेको थियो। प्रहरीले रायको को’ठामा सु’सा’इ’ड नो’ट पनि फेला पारेको छ।
नो’ट’मा उनले आ’फू’खु’सी आ’त्म’ह’त्या गरेको उल्लेख गर्नुका साथै सबैलाई सु’रक्षित रहन आ’ग्रह गरेका छन्। डा. राय पछिल्लो एक महिनादेखि को’भि’ड वा’र्ड’मा काम गरिरहेका थिए। भारतीय मे’डिकल ए’सोसिएसनका पूर्व निर्देशक डा. रवी वा’नखे’डकरले विवेक स’क्षम डाक्टर भएको र उनले महामारीको समयमा सयौंको ज्यान ब’चाएको बताएका छन्।